COVID Prank na Moscow Subway Lands Video Blogger nọ n'ụlọ mkpọrọ Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » COVID Prank na Moscow Subway Lands Video Blogger nọ n'ụlọ mkpọrọ Russia
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị ọrụ mmanye iwu kwuru na Dzhabarov kpachaara anya 'kpasuo ụjọ' na sistemụ njem, n'oge akụkọ COVID-19 gbasaa na China na ebe ndị ọzọ malitere ịmalite isi akụkọ na oke nghọta na ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ aghọtachaghị nke ọma.
Egwu na -enweghị isi mere ka metro Moscow tie mkpu.
A mara Karomat Dzhaborov ikpe mkpegbu.
A mara onye na -ede blọgụ vidiyo ikpe ọnwa 28 n'ụlọ mkpọrọ.
Courtlọ ikpe Russia mara onye na -ede blọgụ vidiyo Tajik dị egwu afọ abụọ na ọnwa anọ n'ụlọ mkpọrọ mgbe ogbugbu dị na ya. Ụzọ ụgbọ oloko Moscow na Febụwarị afọ gara aga, mgbe ọ na -eme ka ọ na -arịa coronavirus ma na -ama jijiji n'ụgbọ ala ụgbọ ala, na -eme ka ndị njem ibe ya tie mkpu.
Onye ọka ikpe nọ n'isi obodo Russia mara Karomat Dzhaborov ikpe ịkpa arụ maka ịkpa ọchị, nke ndị enyi ya sere na mgbe egwu nke nje na -apụta amalitela. E nyere Stanislav Melikhov na Artur Isachenko, ndị ha na ya nọ n'oge ahụ, ntaramahụhụ a kwụsịtụrụ afọ abụọ.
Na vidiyo ahụ, nke ebipụtara na ọwa 'Kara Prank' ya na Instagram, enwere ike ịhụ Dzhaborov ka ọ na -asụ ngọngọ n'ụgbọ ala metro juru eju ma daa n'ala. Mgbe ndị njem na -echegbu onwe ha na -abata nyere ya aka, ọ na -amalite iwe iwe na ijide akpịrị ya dị ka a ga -asị na ọ nwere ihe ọdịdọ. Otu onye na vidiyo ahụ wee tie mkpu "coronavirus," na -ezipụ ndị njem na -apụ na ya.
Ndị uwe ojii jidere prank ahụ ụbọchị ole na ole ka e mesịrị, mgbe ọ pụtara na ọ nyere ndị na-agba ajụjụ ajụjụ adreesị na-ezighi ezi, a tụrụ ya mkpọrọ n'ụlọ ikpe tupu ikpe a abịa. Ndị ọka iwu na mbụ na-achọ afọ anọ maka nwa amaala Tajik.
Ndị ọrụ mmanye iwu kwuru na Dzhabarov kpachaara anya 'kpasuo ụjọ' na sistemụ njem, n'oge akụkọ COVID-19 gbasaa na China na ebe ndị ọzọ malitere ịmalite isi akụkọ na ike na ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ aghọtachaghị nke ọma. N'oge ahụ, ọ bụ naanị ikpe abụọ nke nje ka edekọtara na Russia, mana nde mmadụ 6.21 enyochala nke ọma.